Etu esi tinye adreesị email na LinkedIn | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 30, 2012 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn gbanwere ngalaba Tinye Njikọ ya na, n'uche nke m, mere ogbi nke ịbido usoro nke ịgbakwunye kọntaktị site na adreesị email. Amaghị m na whey ha mere nke a mana ọ bụ usoro usoro 4 kama usoro nke di na nwunye ọ na-ewerebu. Nke a nwere ike ịbụ peeji nke m na-agakarị na LinkedIn mgbe m lọtara n'okwu ma ọ bụ nzukọ. Ana m agafe kaadị azụmahịa nke ndị fol ahụ m chịkọtara wee jikọọ ha.
Na njirimara onye ọrụ ọhụụ, ịgbakwunye njikọ site na adreesị ozi-e, lee usoro ndị a:
Pịa Tinye Njikọ n'elu aka nri mgbe ịbanye nbanye na LinkedIn.
pịa Email ọ bụla akara ngosi na aka nri.
n'okpuru Wayszọ ndị ọzọ iji jikọọ, pịa Kpọọ site na email nke ọ bụla.
Pịnye adreesị email gị wee pịa Ziga Akwụkwọ ịkpọ òkù.
Tags: tinye njikọemailLinkedIn
Dee 1, 2012 na 11: 39 AM
Gini mere ị gaghị naanị chọọ aha ha wee pịa jikọọ?
Dec 1, 2012 na 1:18 PM
Otu n’otu? Ụzọ adịghị! Nke a na-enye m ohere itinye ha niile n'otu oge.
Dee 2, 2012 na 11: 57 AM
Ee, nke a bụ otu n'ime mpaghara ndị mụ na m ga-ekwenye mgbe niile. Anaghị m atụkwasị ndị mmadụ obi na LinkedIn belụsọ na mụ ejirila “njikọ” na ha. Ọ bụghị egwuregwu buru ibu iji hụ ọtụtụ njikọ m nwere ike ịnweta.
Mgbe m gara mmemme m nwere ike ịlaghachi tinye mmadụ ise dị ka njikọ. Ndị ọzọ abanye na SalesForce ma ọ bụ dị ka MQL ma ọ bụ SQL.
Dec 2, 2012 na 12:22 PM
Ọ bụrụ na mmadụ nye m kaadị azụmaahịa ha ma ọ bụ jikọọ m na saịtị ma ọ bụ site na email, anyị ejikọtara. Anaghị m emegbu mmekọrịta ahụ - mana n'ịchọ ihe onwunwe ọ na-eweta aka n'oge ụfọdụ. Achọghị m ịma banyere ọnụ ọgụgụ nke njikọ, m na-eche banyere iru nke netwọk m. Ma ọ na-arụ ọrụ!